ठाकुरको प्रयास असफल, बहुमत जुटाउने अब के गर्छन् ? – Khula kura
ठाकुरको प्रयास असफल, बहुमत जुटाउने अब के गर्छन् ?
केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाउन नसकेपछि ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गराउने मनस्थितिमा पुगेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गराउने मनस्थितिमा पुगेको छ।
जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएका थिए।
ठाकुरले बैठकमा बहुमत सदस्य पुर्‍याउन सकेनन्। कार्यकारिणी समितिका ५१ जनामध्ये १९ जना मात्रै महन्थ ठाकुरको पक्षमा उभिएका छन्। बहुमतका लागि २६ जना केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या नपुगेपछि अब नयाँ पार्टी बनाउने तयारीका साथ अगाडि बढेको ती नेताले बताए।
बहुमत सदस्यको नामावली पुर्‍याउन नसकेपछि नयाँ पार्टी बनाउने सोचमा पुगेको जसपाका एक जना कार्यकारिणी सदस्यले बताए। निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाउनका लागि हस्ताक्षर गर्न आइतबार बबरमहलमा बैठक बोलाइएको थियो।
आयोगले विवरण हेरफेरका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुसार जसपाका दुवै पक्षसँग थप विवरण माग गरेको छ। ठाकुर पक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पठाउन भनेको छ।
केशव झाले दुई अध्यक्षसहित विधान बनाएका छन् भने डा.सुरेन्द्र झाले एक अध्यक्षसहितको विधान बनाइएको स्रोतले बतायो। नयाँ पार्टीमा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसहित दुई जना अध्यक्ष रहने कि एक जना मात्रै अध्यक्ष रहने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
ठाकुर पक्षले आयोगले मागे अनुसारको विवरण जुटाउन सकेको छैन। आयोगले ठाकुर पक्षलाई कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहितको नामावली बुझाउन दिएको समयसीमा समाप्त भइसकेको छ।
अहिले बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा त्यही विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ। जति जना सदस्यको हस्ताक्षर छ, त्यति जनाको नाम आयोगमा बुझाइदिने या नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ।
नयाँ पार्टीका लागि विधान र अन्य दस्ताबेज बनाउने जिम्मेवारी डा.सुरेन्द्रकुमार झा र केशव झालाई दिइएकोमा दुवैले नयाँ पार्टीको विधानको मस्यौदा तयार गरेर दिइसकेका छन्।
यसका लागि कागजात तयारी गर्ने काम भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए।
भाग्य र स्वभाव कस्तो हुन्छ राती जन्मेको मान्छेको ? जान्नुहाेस्